Hawo nadiif ah ayaa ka sii dari karta cawaaqib xumada kululaaneysa aduunka | Saadaasha Shabakadda
In kasta oo laga yaabo inay xiiso leedahay, Haddii bini aadamku awoodi karo inuu baabi'iyo dhammaan qashinka sunta ah ee uu maalin walba hawada u sii daayosida ay hada wax yihiin cawaaqib xumada kululaan doonta aduunka ayaa kasii dari doonta. Sababta Miyaanay ahayn inay caksiga dhacdo?
Hawada nadiifka ahi waa, sida laga garan karo magaceeda, waxa ugu caafimaadka badan ee noole kasta neefsan karo, laakiin bini aadamku wuxuu wasakheeyaa meeraha Dunida aad ayeyna mar hore ugu guuleysteen inay lumiyaan isku dheelitirnaantii dabiiciga ahayd sidaa darteed waxaan soo saarnay a waayi cusub oo joqoraafi ah: the Antropocene.
Si loo gaaro gabagabadaas cajiibka ah, koox saynisyahanno ah ayaa adeegsaday afar nooc oo cimilada adduunka ah oo u ekeeyay saamaynta dhici doonta haddii sulfates iyo walxaha kaarboon ku saleysan, oo ay ku jiraan dambaska, laga saaro.
Sidaa darteed, Waxay awoodeen inay ogaadaan inay jiraan aerosol gaar ah oo maanta waxa ay sameeyaan ay ka ilaalinayaan meeraha qayb ka mid ah shucaaca qoraxda ee ay hesho. Intaas waxaa sii dheer, hadii qiiqa gebi ahaanba la baabi'iyo, celceliska heerkulka guud ee adduunka wuxuu ku kici lahaa 0,5-1,1 darajo oo ka sarreysa sidii la filayay, taas oo noqon doonta dhibaato daran Laakiin weli wax kale ayaa jira.
Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen taas baabi'inta qiiqaas waxay cawaaqib ku yeelan doontaa heer gobol, wax ka beddelka qaababka cimilada sida roobka meelo ka mid ah adduunka. Tusaale ahaan, Bariga Aasiya waxay la kulmi doonaan koror weyn oo roobka iyo dhacdooyinka cimilada daran.
Marka, maxaa la sameeyaa? Jawaab fudud malahan. Waxa na xanuujiya ayaa ah, qarnigan aan joogno, inagu "sugaya". Dabcan, sheykiisu ma aheyn inuu wasakheeyo, laakiin taasi waa qalad taas, waxaan u maleynayaa, inaanan sii xallin karin ilaa aan helno wado. Rajo xumo? Waxaa laga yaabaa in. Laakiin sida ay wax u shaqeeyaan, ma jirto sabab badan oo rajo lagu muujiyo.
Waxaad haysaa macluumaad dheeri ah Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Hawo nadiif ah ayaa ka sii dari karta cawaaqib xumada cimilada adduunka